Zvitsauko 40-66 zvaIsaya zvinoita sepfupiso yeTestamente Itsva, chikamu 2
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Zvitsauko 40-66 zvaIsaya zvinoita sepfupiso yeTestamente Itsva, chikamu 2
Zvitsauko 40-66 zvaIsaya zvinoita sepfupiso yeTestamente Itsva, chikamu 2
Muchidzidzo chadarika takatarisa maBhuku eTestamente Itsva kubva kuna Mateo kusvika kuna vaGaratia, uye kuti anofanana sei neBhuku raIsaya.
MaKristu mashoma anoziva kuti nhorondo yekereke yakafamba sei nemano aSatani anoshanduka pakubata kwake kwaanoita maKristu nenhume dzinotumwa naMwari kuzoratidza vaya vanoteerera gwara rekufamba naro mukati memvura dzine matambudziko dzenguva yavo.
Mabhuku manomwe anotevera anotevera nyaya yenguva nomwe dzemakereke.
Iyi inyaya hombe inobatanidza makore anosvika 2 000 enhorondo yekereke.
Nguva yega yega inomiririrwa neBhuku remuBhaibheri.
Bhuku 49: VaEfeso
Iri rinotaura nezvekereke yekutanga. Pauro akaita nheyo mukereke yenguva yekutanga iyi dzatinofanira kutevedzerwa munguva dzemakereke aizotevera iyi.
VaEfeso 2:7 Kuti nenguva dzinouya ....
VaEfeso 2:20 Makavaka pamusoro penheyo dzavaapositora navaporofita, Kristu Jesu amene ari Ibwe rapakona.
VaEfeso 2:21 Maari imba yose yakasonganiswa ichikura kuti ive tembere tsvene munaMwari.
Isaya 49:6 ndichapawo uve chiedza chavahedheni
Nguva yekereke yekutanga ndiyo nguva yakanyorwa Testamente Itsva nevapositora. Ichi ndicho Chiedza chemweya chaizorambwa nemaJuda chichitambirwa nevahedheni. Nguva yekutanga iyi yakatanga mugore 33 AD pakarovererwa Jesu Mweya Mutsvene ukaburuka mazuva makumi mashanu akazotevera pazuva rePentecositi. Nguva yekereke iyi yakazopera makore mashoma 200 AD risati rasvika pakatanga kereke kubva paMagwaro ikatanga kusarudza mabhishopu sevatungamiriri vemaKristu pamaguta. Hutungamiriri hwevanhu hwakanga hwatanga kupindira. Nguva yekereke yechipiri yaive nguva yekurwisana yakauraiwa maKristu akawanda. Marcus Aurelius akava mambo muna 160 AD akatanga ndiye kuuraiwa kwemaKristu kwekutanga mukuuraiwa kwavo kusere kwakaitika. Zvisinei mukati menguva iyoyo kereke yekutanga yekutenda zvakataurwa nemaporofita yakapera ikapinda munguva yekereke yechipiri yehutungamiriri hwevanhu vaidaidzwa kuti mabhishopu vakaita kuti vanhu vatevere zvido zvavo, zvaive zvakati nakei uye zvakati ipei. Pfungwa dzevanhu dzisiri muMagwaro idzi dzakabva dzava tsika dzemakereke.
Hutungamiriri hwevanhu ndiko kwakava kukanganisa kukuru kwakapinda mukereke yemaKristu mumashure mekufa kwevapositora. Vapositora vaiziva chokwadi vakabva vanyora Testamente Itsva. Zvino vanhu vaifanira kutevera hutungamiriri hweMweya Mutsvene. Asi izvi zvaisazovaka masangano makuru, anova nheyo dzemari nesimba nembiri. Saka vatungamiriri vemakereke vakabva padzidziso dzevapositora chiKristu chemakwikwi chikabva chasimudza musoro wacho wakaipa.
ISAYA 49:9 kuti uti kuna vakasungwa 'Budai',
Vahedheni vaive vasungwa muzvitendero zvemapegani zvezvakavanzika zveBabironi, uye gapu rekuita kwenyama kwemunyika kwechinyakare cheEgipita. Evhangeri raizotendera mahedheni kuti vasunungurwe kubva muhusungwa hwetsika dzechipegani vonamata Mwari murusununguko rweShoko rake.
ISAYA 49:22 ndichasimudzira marudzi ruoko rwangu
Saka Isaya akaporofita kuti Mwari aizotendevuka kubva kuvaJuda achitarira vahedheni muchaputa iyi inomiririra nguva yekereke yekutanga. Pakutanga maKristu mazhinji vaive maJuda asi nekuparidzwa kwakaitwa Evhangeri, vahedheni vakawanda vakagamuchira Kristu kereke ikava yemahedheni.
Bhuku 50: VaFiripi
Nguva yekereke yechipiri.
Iyi yaive nguva yekuuraiwa kwemaKristu. Izvi zvakatanga namambo Marcus Aurelius 160 -181 AD yakatanga kuuraiwa kwekutanga pakuuraiwa kusere kwemaKristu kwakazopera muna 312 AD.
Pano tinodzidza chokwadi chinorwadza hazvina kutorera kereke yekutanga nguva refu vanhu vasati vatanga kuvimba nehutungamiriri hwevanhu kuti vavaudze kuti voitei uye kuti votenda mune zvipi. Zvishoma nezvishoma zvitendero izvi zvakava tsika ipapo vakabva pane zvakanyorwa muBhaibheri. Saka Satani akasukurudza hutungamiriri hwekereke akasimudzira zvinzvimbo zvavo kuvaita mabhishopu ane simba kwazvo, umwe neumwe wavo aikwanisa kutonga kereke muguta. Mafungiro akasiyana siyana nedzidziso zvakapararira. Kutevera izvi Mwari akatumira kuuraiwa kunorwadza kwemaKristu. MaKristu akava pakutiza nehupenyu hwavo. Vanhu vanosvika mamiriyoni matatu vakauraiwa nemadzimambo eRoma. Kuva nenguva yakaoma kwakavaita kuti varambe vari mugwara rakanaka.
Zvinoita sekuti ndizvo zvatiri maKristu. Kana tiri panguva yakaoma, pakarepo tinoedza nepatinogona napo kubatira Mwari.
Kuomerwa nekukunda ndipo panoumbwa hunhu hwemaKristu huchiswatanudzwa.
VaFiripi 1:29 … asi kuti mutambudzike vo nokuda kwake.
VaFiripi 2:8 Kristu Jesu ... akazvininipisa akateerera kusvika parufu.
VaFiripi 3:8 Nokuda kwake ndikazviidza marara, kuti ndiwane Kristu.
Nhasi uno vanhu vanoshingirira pakubudirira chavataura vanochiwana. Ndinofunga kuti pane chinhu chatiri kurasikirwa nacho nhasi uno.
VaFiripi 4:11 Nokuti ini ndakadzidza kutenda nezvose zvandinazvo.
Izanhi rakanaka kunguva yedu ino inofanira kushingirira kurovererwa sekuuraiwa kwakaitwa mamiriyoni emaKristu nemadzimambo eRoma. Makereke manomwe ari kupedziswa ndiwo muono mukuru waMwari kuvanhu. Muono mukuru uyu unokurira shuviro dzedu dzenyama dzemiono miduku yatiinayo uye yezvinhu zvinotifadza.
Iyi inguva yehutungamiriri hwevanhu kukereke apo munhu aizvisimudzira kuti ave bhishopu weguta. MaKristu ese aifanira kuteerera mutungamiriri uyu.
ISAYA 50:6 Ndakapa musana wangu kuvarovi, namatama angu kuna vakatavura ndebvu dzangu: handina kuvanza chiso changu pakunyadziswa nokupfirwa mate.
Nekereke ichishingirira pakurovererwa, Isaya akavayevuchidza kutambudzwa kwaJesu Kristu.
ISAYA 50:7 Nokuti Ishe Mwari achandibatsira, naizvozvo handina kunyadziswa; naizvozvo ndakaita chiso changu semusarasara, vuye ndinoziva kuti handinganyadziswi.
Kusimba pakuteerera Mwari chete ndiko kuchakundisa maKristu kuti abude mukurwadziwa kwavo.
VaFiripi 1:1 ... kuvatsvene vose muna Kristu Jesu, vari paFiripi, navatariri (ruzhinji) navaranda ...
Kwaive navatariri vakawanda muguta reFiripi. Kwaive kusina hutungamiriri hwemunhu mumwechete.
VaFiripi 2:7 Kristu Jesu... Asi wakazviita asina maturo, akazvitorera chimiro chomuranda.
Pachinzvimbo chekuva varanda, mabhishopu akakwikwidza kuva nemasimba kuti vave dzinodaidzwa kuti “imbwa huru”.
ISAYA 50:11 Tarirai, imi mose, munobatidza moto, munozvisunga zviuno nezvitsiga; fambai muchiedza chomoto wenyu, napakati pezvitsiga zvamakabatidza. Muchapiwa izvozvo noruoko rwangu, muchavata pasi muchitambudzika.
Mabhishopu nevatungamiriri vemakereke vaiita dzidziso dzavo vachifamba muchiedza chakatungidzwa nevanhu ichi pavaitonga makereke. Mafungiro akangwara netsika dzakasimuka kuti dzitungamiririre maKristu kuti abve pane zvakanyorwa muBhaibheri. Mabhishopu anopfeka nguvo shava nemabhanhire mumisoro yavo.
Zvinhu zvaive zvatanga kunyanya kubva pazvinyorwa zveBhaibheri.
Bhuku 51: VaKorose.
Izvi zvinotsanangura nguva yekereke yechitatu. Nguva yekereke yechitatu yakatanga munana 312 kusvika 600 AD. Kereke yakabatana nezvematongerwo enyika mambo Constantine vakatonga kereke, akaita bhishopu weRoma musoro wekereke yekumadokero. Constantine aive murume akasimba akamanikidzira mafungiro ake pamaKristu, akavaita kuti vasanganise zvavaitenda nechinyakare chechipegani uye mitambo yavo. Negore 350 AD zuva rakaberekwa mwari wezuva 25 Zvita rakabva razova Kisimusi nekukasika. Zvimwe zvakavanzika zveBabironi zvakabva zvaita dzidziso dzemaKristu. Tiriniti yeVanhu vatatu muhuMwari ndiyo yakava dzidziso huru, izvozvo hazvina kunyorwa muBhaibheri, kuti zvimanikidzwe pavanhu.
ISAYA 51:12 Ini, iyeni, ndinokunyaradzai; ndiwe aniko, unotya munhu unozofa kana mwanakomana womunhu, uchaitwa sovuswa.
Constantine aive nehudzvanyiriri uye nesimba kwazvo. Vakawanda vakagamuchira bhishopu weRoma semutungamiriri wavo pamweya nekuti vaitya Constantine. Muna 312 AD, vakawanda vakamanikidzwa dzidziso yeTiriniti, inova isiri muMagwaro. Asi uku kwaive kukanganisa kukuru sezvo pfungwa iyi yaive yakaipa.
Kereke yaive yaita chivi chegomba reshumba chaicho. Nekuti akamira kuvauraya, maKristu akatendera murume ane simba kwazvo uyu Constantine kuti atonge kereke nekuvaudza kuti votenda mune zvipi. Izvi zvaitoipisa kumaKristu kukunda zvaiitwa nekuuraiwa. Dzidziso yeTiriniti, yakabva pazvakavanzika zveBabironi, haina kunyorwa muBhaibheri uye dzidziso isimo muZvinyorwa zveBhaibheri iyi yave chikonzero chekuti vanhu varambe vachiunza dzimwe dzidziso dzavo vega. Kereke yakabva pakurarama nezvinyorwa zveBhaibheri chete. ChiKristu chakatsiviwa nechichechichechi. Tsika nemifungo yevanhu yakatsiva Bhaibheri.
Saka vaKorose rinosimbisa kuzara kwovuMwari munaKristu.
VaKorose 1:15 Kristu ... Ndiye mufananidzo waMwari usingavonekwe.
Mweya waMwari usingavonekwe uri munaKristu, anozviratidza kupfurikidza muviri weMunhu Jesu anova “muviri wenyama yekunze” waMwari watinokwanisa kuona.
VaKorose 2:8 Chenjerai kuti murege kutapwa nomunhu novuchenjeri (huchenjeri hwemaGiriki hunosanganisa kutaura kwekuti vatatu-mumwe, mumwe-muvatatu, Baba neMwanakomana muhunhu humwechete. Zvese izvi hazvisi muBhaibheri.)
VaKorose 2:9 Nokuti kuzara kwovuMwari kunogara maari (Kristu) pamuviri.
Jesu ndiye mudziyo “muviri wenyama” mauri munogara Mwari asingaonekwe.
Hakuna kwakataurwa neBhaibheri kuti Jesu Munhu wechipiri pakuzara kwovuMwari.
VaKorose 3:17 Itai Zvose nezita raShe Jesu.
Itai zvose-izvi zvinosanganisa rubhabhatidzo rwemvura muZita raShe Jesu.
Hakuna makereke arikubhabhatidza nenzira iyi nhasi uno.
Pakati pa 250 - 500 AD kereke yeCatholic yakatanga uye ikanatsa dzidziso yeTiriniti. Tiriniti payakava dzidziso yakakwana yeRoman Catholic muna 325 AD, ipapo havana kuzogona kuwana Zita rimwechete reVanhu vatatu vakasiyana saka vakabva vaisa mutemo wekubbhabhatidza muzita raBaba, Mwanakomana nereMweya Mutsvene. Zvishoma nezvishoma munhu wese akatanga kufunga kuti ichokwadi kuti mazita ezvinzvimbo matatu iZita raMwari.
Jesu akarasikirwa nechinzvimbo chake chekuva Mwari wemasimba ose akadzikisirwa kuva Munhu wechipiri muvuMwari.
ZVAKAZARURWA 1:8 Ndini Alfa naOmega, wokutanga nowokupedzisira, ndizvo zvinoreva Ishe Mwari, uripo, wakanga uripo, nouchazovapo, wamasimba ose.
Jesu ndiro Zita raMwari reMunhu.
MaCatholic anoti Petro ndiye aive Pope wavo wekutanga.
Petro akabhabhatidza muZita raShe Jesu Kristu (Mabasa 2:38).
Saka maPope haachatevera muenzaniso wakasiiwa naPope wavo wekutanga Petro, aivewo nemudzimai.
Kubhabhatidzwa kunomiririra kufa, kuvigwa nekumuka muna Jesu Kristu. Kana Baba neMweya Mutsvene vari Vanhu vakasiyana, ipapo havana kufa, kana kuvigwa uye kumuka. Saka rubhabhatidzo haruvasanganisi.
ISAYA 51:10 (Ishe Jehova) Wakashandura nzvimbo dzakadzika dzegungwa mukapaita nzira pangayambuka vakadzikinurwa here?
Apo Jehova, Mwari akayambutsa maJuda Gungwa Dzvuku. Zvaishamisa kwazvo, apo Jesu, Mwari akaitira Petro nzira kuti afambe pamusoro pegungwa rakatsamwa. Saka Jesu ndiye Ishe.
Chinhu chimwechete chikuru chakakanganiswa nemaKristu ndechekusimudzira hutungamiriri hwevanhu vachibva vatevera mazano avo vari muruzhinji mumasangano.
VaKorose 3:25 Hazvisi zvinovonekwa zvomunhu zvinotendwa (naMwari).
Mwari haafadzwi nekusimudzirwa kwemabhishopu vanotora chinzvimbo chekutonga vanhu nemaguta.
VaKorose 4:15 Ndikwazisirei … naNimfa, nekereke iri mumba mavo.
Vatendi vekereke yekutanga vaisangana muzvikwata zviduku mudzimba. Izvi zvaimisa munhu mumwechete kuti ave nesimba pamusoro peungano huru. Nekuda kwenzira iyi, hakuna munhu mumwechete anozviti ndibhishopu weguta.
ISAYA 51:16 Ndakaisa mashoko angu mumuromo mako.
Mwari anoda kuti titaure Shoko rake chete, kwete zvatinofunga kana tsika dzevanhu vanotungamirira.
Nguva ichangodarika, kereke yakavanda yekuChina yaisanganirana mudzimba. Izvi zvakatungamirira pakukura uye kuva nesimba kwechiKristu chaive chisina kuvimba nevanhu muChina pasina vanhu vaitungamirira kana vaidzora ungano huru.
ISAYA 51:2 Tarirai Abrahama, baba venyu, naSarah akakuberekai; nokuti ndakamudana achiri mumwechete, ndikamuropafadza, ndikamuita vazhinji.
Mwari anotarisa munhu mumwe nemumwe. Chinhu chekuti vanhu vanobva pasangano guru hazvirevi kuti vari kunatsa.
Bhuku 52: I Vatesaronika.
Bhuku remwadhi kuvaTesaronika rinotaura pamusoro penguva yekereke yechina. Nguva yekereke yechina iyi ndiyo inodaidzwa kuti nguva dzepakati (Middle Ages) dzinozivikanwazve seNguva yeRima. Makore 900 erima pamweya kana husiku hunodaidzwa kuti Nguva yeRima hwakatora makore anoda kubva muna 600 AD kusvika muna 1500 AD. Iyi ndiyo nguva yaive nerima guru apo tsika nechinyakare chemapegani chaipinda mukereke yeCatholic. Iyi ndiyo nguvawo zvakare yekuuraiwa kukuru kwemakumi nemamiriyoni evanhu vaive vasiri maRoman Catholic. MaKristu akaona tariro yavo panyika ichiparadzwa saka vaive vave kufanira kusimba pakutarira kuuya kwaMwari, anouya sembavha vusiku.
I VaTesaronika 1:10 nokumirira Mwanakomana wake pakubva kwake kudenga,
1 VaTesaronika 5:2 Kuti zuva raShe rinosvika sembavha.
ISAYA 52:8 Chinzwa inzwi renharire dzako! Dzinodana namanzwi, dzinoimba pamwechete; nokuti dzichaonana zviso zvakatarisana, kana JEHOVA achidzokera Ziyoni.
Chinhu chimwe chairamba chichisimbisa vanhu ndechekuti Mwari aizodzoka. Ziyoni chiratidzo chetariro yedu inouya. Ziyoni inomiririra kuzadziswa kwekuda kwaMwari kwakanakisa. Chero chinhu chinotambudza maKristu panyika, Ziyoni inomiririra kukunda kunoita kuti marwadzo ese ehupenyu huno aite “sematambudziko akareruka”.
ISAYA 52:14 Vazhinji sezvavakashamiswa pamusoro pako, (chiso chake chakanga chakakuvadzwa kupfuvura chavamwe vanhu, nechimiro chake kupfuvura chavanakomana vavanhu),
Jesu akakuvadzwa paCalvary kereke ikakuvadzwa muNguva yeRima uye nenguva yakatevera Nguva yeRima iyi apo vapikisi vekereke yeCatholic vanosvika 68 miriyoni vakauraiwa.
ISAYA 52:4 Nokuti zvanzi naShe JEHOVA, vanhu vangu vakaburukira Ijipita kare kundogarako; muAsiria akavamanikidza pasina mhosva.
MaJuda akamanikidzwa navaAsiria. Munguva yeRima maKristu akamanikidzwa nesimba raitonga rekereke yeCatholic raive nekubata kune simba munezvematongerwo enyika uye zvechitendero muEurope.
ISAYA 52:5 … Zita rangu rinongomhurwa zuva rose. Ndizvo zvinotaura JEHOVA.
Zita remunhu raMwari ndiJesu Kristu, rakarambwa rikatsiviwa nemazita ezvinzvimbo zvitatu: Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene.
Bhuku 53: VaTesaronika vechipiri.
II VaTesaronika 2:3 Nokuti zuva iro harisviki, kana kusati kwatanga kuvuya, nomunhu wezvivi, mwanakomana wokurashika asati ambovonekwa.
Husiku hweNguva yeRima hunofanira kutanga kuuya Jesu asati adzoka. Mutungamiriri wekereke yeRoman Catholic, Pope, aive murume ane simba kwazvo muEurope. Akamanikidza munhu wese kupfugamira dzidziso dzeCatholic, zvinoita kuti azivikanwe ari munhu wezvivi. Chivi ndiko kusatenda. Kutenda chero chinhu chakasiyana nezvakanyorwa muBhaibheri ndiko kusatenda saka chivi.
II VaTesaronika 2:7 Nokuti chakavanzika chokusarurame (kuziva kuti chinhu chakaipa asi mochiita chete) chotobate-basa racho;
Kare munguva yekereke yekutanga vanhu vaive vatotanga kutenda muzvinhu zvisimo muBhaibheri. Mukati meNguva yeRima maPope akaita chinhu ichi chekubva vaenda kure chaiko nezvinyorwa. Vakava nesimba rekumanikidza vanhu vose kuti vazviwisire kutsika nezvitendero zvavo.
Vanhu vaiziva kuti kwaive kutadza asi kutenderana nemaRoma kwaive kuda kweruzhinji, saka vaitomanikidzwa kutevera kwakawandwa. Imwe sarudzo kubva pane iyi rwaive rufu.
II VaTesaronika 2:11 Saka Mwari unovatumira simba rokukanganisa, kuti vatende nhema,
Kunyengerwa neshamwari kunotimanikidza kuti tizvikanganise kuti isu tikwane musangano rekereke.
(“Churchianity”) “chichechichechi” chakatsiva chiKristu. Vanotenda zvinotaurwa nekereke, kwete zvinotaurwa neBhaibheri.
Mbeu yemasangano yakadyarwa zvakasimba. Ndevekereke yavo, kwete kuti ndevaKristu.
Muna 1302 Pope Boniface 8 akatanga “Unam Sanctam” (Kereke Tsvene imwechete) zvinoreva kuti hakuna ruponeso kunze kwekereke yeRoman Catholic. Ruponeso rwaiwanikwa chete neavo vanozviwisira kuna Pope zvakazara. Uku ndiko kutaura kukuru kwakabva pakutonga kwemaPope kubva muNguva yeRima.
Munhu wechivi akaziviswa.
Kusatenda kuti ruponeso runobva pahukama hwako naJesu Kristu chivi, apo paunoreurura zvivi zvako kwaari womukumbira kuti akusuke zvivi zvako, obva ava muponesi wako. Ichi chiitiko chiri pakati pemunhu umwe neumwe naJesu.
Nguva yeRima ndiyo yakava nguva yakarebesa zvakare yaitambudzika kereke, yakatora makore anoda kusvika 900, kubva muna 600 AD kusvika muna 1500 AD.
Saka Isaya akaisa chaputa yakasarudzika pakutambudzika kwaKristu kuti akurudzire vatendi muNguva yeRima. Vaitambudzika mukati mehusiku hwaiita kunge husingaperi asi Jesu akatambudzika kukunda ivo vose. Saka vaifanira kuramba vachitenda apo Mwari vaiita hurongwa hwavo hwakavanzwa.
ISAYA 53:1 Ndiyaniko akatenda zvatakaparidzirwa? Ruoko rwaJehova rwakaratidzwa kunani?
Ruvoko rimwe izwi rinoreva kuti chombo. Munondo waMwari iShoko rake. Ndiyani anotenda Shoko sezvarakanyorwa riri? Hakuna nokuti vanhu vanoshandura mazwi akanyorwa muBhaibheri.
Kereke yeRoman Catholic yakabva pazvinyorwa zveBhaibheri zvakanyanya. Vatendi vechokwadi vaive vashoma.
ISAYA 53:2 Nokuti akamera pamberi pake sebukira, nyoro, somudzi, unobuda pavhu rakaoma; haane chimiro kana umambo; kana tichimuona haana kunaka kuti timude.
Iyi yaive nguva yekurovererwa nekuuraiwa. Kwaive nemukana muduku kwazvo wekubudirira kuva muKristu.
ISAYA 53:3 Akazvidzwa nokuraswa navanhu, munhu wokurwadziwa, akaziva urwere, somunhu anovanzirwa navanhu zviso zvavo; akazvidzwa nesu hatina kumukudza.
MaKristu akazvidzwa, akarambwa akarondwa nekuvuraiwa.
ISAYA 53:4 Zvirokwazvo akatakura matenda edu, nokusimudza kurwadziwa kwedu; asi isu takati akatambudzwa, akarohwa naMwari nokumanikidzwa.
Chero chinhu chakasangana nemaKristu muNguva yeRima, Jesu aive asangana nacho zvakapetwa.
Nguva yekereke yekutanga yaive Mbeu yehupenyu husingagumi panyika. Mbeu iyi yaifanira kuvigwa, yofa yovora pasi pevhu kuitira kuti igokwanisa kuunza dzimwe mbeu zhinji. Nguva yeRima ndiyo nguva yakavigwa chokwadi, chikafa mukati metsvina nekutadza kukuru kwenguva iyoyo.
ISAYA 53:12 Saka ndichamuganhurira mugove pamwechete navakuru, uchagoverana zvakapambwa navanesimba; nokuti wakadurura mweya wake pakufa, akaverengwa pamwechete navadariki; kunyangwe zvakadaro wakatakura zvivi zvavazhinji, akanyengeterera vadariki.
Kumanikidzwa kwaKristu kwakamutengera Denga nenyika. Saka kutambudzika nerufu rweavo vatsvene veNguva yeRima kwakavagonesa kuti vawane chikamu chavo chenguva inouya yavatsvene. Vakatambura nguva refu uye yakaoma. Asi mubayiro wavo unouya mukuru.
Zvino vusiku hurefu hweNguva yeRima hwakadarika zuva reEvangeri reMutsiridzo rakabuda naMartin Luther muGermany.
Bhuku 54: Timotio wekutanga. Rumutsiridzo rwaLuther rwakatanga.
Mwadhi dzose kuna Timotio dzinomiririra nguva yekereke yechishanu yakatanga neMutsiridzo yaMartin Luther kuGermany.
ISAYA 54:2 Kurisa nzvimbo yetende rako, ngavatatamure maketeni eugaro hwako; usarege urebese mabote ako, usimbise mbambo dzako.
Chitendero chikuru chekuti vakarurama vachararama nekutenda chakaparidzwa pachena nevamutsiridzi. Nyasha dzaMwari dzinokwanisa kupararira kunofukidza chero munhu anoda kuponeswa.
ISAIAH 54:9 Nokuti izvi zvakaita semvura yaNoa kwandiri; nokuti sezvandakapika kuti mvura yaNoa haingazodarikizve napanyika;
Mvura yaNoa yakafukidza nyika yose ikaparadza zvose zvairarama pairi. Mvura dzakabva dzaitwa kuti dzipwe. Saka marwadzo nekuuraiwa nekutadza kwemuNguva dzeRima kwakafukidza Europe zvino Mwari akashandisa vamutsiridzi kuti kurudziro nesimba remaPope zvipwe.
I Timotio 2:5 Nokuti kunongova naMwari mumwechete, noMureveri mumwechete vo, pakati paMwari navanhu, ndiye munhu Jesu Kristu.
Iyi ndiyo mhinduro yaLuther inofadza pakutaura kwe “Unam Sanctam” yeRoman Catholic yekuti Pope amire pakati pevanhu naMwari. Munhu Jesu ega ndiye amire pakati pedu naMwari. Jesu Munhu, ndiye “muviri wemunhu” mauri munogara Mweya waMwari usingavonekwe wakavanzwamo kuitira kuti Baba vasingaonekwe vazviratidze kupfurikidza mabasa eMunhu anoonekwa Jesu, anova Mwanakomana waMwari.
I Timotio 3:16 … chakavanzika chokunamata chikuru kwazvo, chokuti: Iye Mwari wakaratidzwa panyama.
Hakuna Pope anodiwa kuti tiponeswe. Kereke haidi munhu mumwechete kuti ave mutungamiri wayo.
I Timotio 5:17 Vakuru vanobata kereke zvakanaka ngavanzi vanofanirwa nokukudzwa kaviri.
Ungano yega yega yemaKristu yaizotungamirirwa nevakuru, kwete kutongwa nemunhu mumwechete.
Kutonga kereke kwemunhu muwe kwakabva pamafungiro emasangano kwakavambwa neRoman Catholic kukaita kurudziro mumasangano akabuda pairi.
I Timothy 4:1 … nedzidziso dzemweya yakaipa, .... achidzivisa vanhu kuwanana ...
Uku kumhurwa kuri pachena kwemurayiro weCatholic wekuti maprista, mabhishopu nemaPope haatenderwi kuwana. Nhasi uno kune nyaya dzakawanda dzekubata chibharo dzirikuongororwa kana kuti dziri kuvigwa muchipurista cheCatholic.
ISAYA 54:5 Nokuti muiti wako ndiye murume wako, JEHOVA wehondo ndiro zita rake;
Wanano yakanakira vanhu vose. Mwari anoshandisa wanano setsananguro yeruwadzano rwake nevanhu Vake. MaPrista, mabhishopu nemaPope vangadai vari pachidanho chiri nani dai vaiwana.
Bhuku 55: Timotio Wechipiri
Mutsiridzo yevakabuda muRoma vemasangano yakaita zvakanaka kwazvo asi yakaita chitadzo chikuru chimwechete chekuita masangano akawanda vachibva vatanga kusvorana pachavo. Sangano rega rega raifunga kuti ndiro rine chokwadi chizere. Masangano akafa nekuti akaramba kuenda mberi pakaziviswa chiedza chitsva naJohn Wesley, chaizotungamirira vanhu kunguva huru yemamishinari.
II Timotio 1:15 … vose vari paAsia vakandifuratira;
II Timotio 4:4 Vachifuratidza nzeve dzavo pazvokwadi
Vateveri vevamutsiridzi vakatanga kuzvisungirira paungano dzemasangano, vachibva vafuratira Magwaro (akanyorwa naPauro) vachitevera ngano dzavo nedzidziso dzetsika nechinyakare. Vamutsiridzi vakatanga kupararira nemasangano evakabuda muCatholic achirwisana, uyezve vachirwisa Roma. Mumutsiridzi mukuru Calvin akatoita kuti Servetus apiswe nekuti aipikisa Tiriniti uye rubhabhatidzo rwevana vaduku. Sangano rega rega raifunga kuti rine chokwadi chakazara uye kuti hakuna chiedza chitsva chaizoziviswa. Vemasangano anopikisa vakanyudza vakawanda vekereke yeAnabaptist vaiita rubhabhatidzo rwekunyika mumvura zvakazara.
ISAYA 55:2 Munoparadzireiko mari muchitenga zvisati zviri zvokudya? (vairipira chegumi chavo asi vatungamiriri vekereke vaiparidza mifungo yavanhu) nesimba renyu muchitenga zvisingagutisi? (vaibatira tsika dzesangano rekereke yavo dzisimo muMagwaro) nditeererei zvakanaka mudye zvakanaka, uye mweya yenyu ngaizvifadze nezvakakora. (Vemasangano vanofanirwa kuva vakatarira paMagwaro zvakazara).
Vemasangano akabuda muRoma havana kuziva kuti kana mbeu yadyarwa ikabuda inopinda nemuzvikamu zvakasiyana siyana.
Rumutsiridzo rwaingova asi mashizha.
Hurume hwembeu hwaizopeperetswa mumunda wese apo nguva yemamishinari yaitora evhangeri ichitenderera naro pasi rese.
Zvino mateko ePentecositi akabva atanga kubuda, aitaridzika sembeu.
Zvino pekupedzisira mbeu yakazokura apo chokwadi chakatanga kudzorerwa yaitaridzika sembeu yekutanga yenguva yekereke yekutanga yaive yakafushirwa netsvina yeNguva yeRima, isati yabuda kuva inorarama semashizha akasvibira eRumutsiridzo.
ISAYA 55:10 Nokuti mvura nechando sezvazvinoburuka zvichibva kudenga, zvisingazodzokeriko, Asi zvinodiridza nyika, zvichiiberekesa nekuitungisa maruva, ichipa mudzvari mbeu, nomudyi zvokudya;
Mashizha anobuda, zvino maruva kozouya mbeu. Isaya ari kutaura pamusoro pezvidanho zvakasiyana zvinokura nembesa.
II Timotio 2:6 Murimi (hurudza) unobate-basa (kuti mbeu dzikure) ndiye unofanira kutanga kudya zvibereko.
Murimi anoisa simba zhinji achisakurira, kudiridzira uye kuisa manyowa pambesa kuti dzikure. Saka Jesu akatambudzika kuti kereke yake ikure muchokwadi ichiita zvaanoda kuti iite.
ISAYA 55:9 Nokuti denga sezvarakakwirira kupfuura nyika, saizvozvo nzira dzangu dzakakwirira kupfuura nzira dzenyu, nendangariro dzangu kupfuura dzenyu.
Nguva yega yega haina kuziva kuti kwaive nechikamu mukukura kwembesa dzehupenyu husingaperi.
Tinotapwa muzviitiko zvenguva yedu. Totadza kuona kuti Mwari ane umwe Muono mukurusa waari kuzadzisa. Saka tinofanira kuteerera zvakanyorwa muBhaibheri nekuti ndizvo zvega zvinotitungamirira patiri kuenda mune ramangwana risina anoziva.
II Timotio 2:15 Shingairai kuti uzviratidze pamberi paMwari ... unonatsa kururamisa shoko razvokwadi.
Tinofanira kuziva kuti ndechipi chikamu chekukura kwekereke chiri kurehwa muBhaibheri. Tinoda kuziva kuti tiri papi pahurongwa hwemuono mukuru waMwari.
Vateveri vevamutsiridzi vakazvirovedzera muzvitendero zvemasangano uye tsika dzemo vakaramba kuenda mberi.
Saka Mwari akatanga nguva itsva yekereke yemamishinari yaikurudzirwa naJohn Wesley achisimbirira pahutsvene nekutenderera vachiparidzira.
Bhuku 56: Tito Nguva yehutsvene yaWesley nenguva yemamishinari
ISAYA 56:8 Ishe Jehova, anounganidza vakadzingwa vaIsraeri, anoti, 'Ndichaunganidzazve vamwe kwaari, pamwechete navake vakaunganidzwa.
Iyi ndiyo yaive nguva yendarama yechiKristu apo mamishinari vakaenda kure vakatambanuka pasi rese kuti vaunganidze vanotendeuka kuna Kristu, kunze kweavo vaive vatounganidzwa kare nevamutsiridzi kuna Kristu muEurope.
ISAYA 56:1 Zvanzi naJEHOVA, Chengetai kururamisa, muite zvakarurama; nokuti ruponeso rwangu rwodokusvika, kururama kwangu kworatidzwa.
Nguva yemamishinari yakatanga 1800 AD ave pedo kusvika. Europe yaive yashandisa nyanza dzayo nezvikepe kuti ipambe nzvimbo zhinji dzepasi rino. Zvino mamishinari akabva kuEurope neAmerica vakakwanisa kupararira pasi rese.
Chekutanga, mamishinari akadzidzisa ruponeso kupfurikidza kugamuchira Jesu seMuponesi wemunhu.
Vachibva vadzidzisa kururama.
Kururama muna Mwari ndihwo hutsvene. Chero chinhu chisina kururama hachikwanisi kuva chitsvene.
ISAYA 56:2 Akaropafadzwa munhu anoita izvozvo, noMwanakomana womunhu anozvibatisisa, anochengeta Sabata kuti arege kurimhura, nokudzora ruoko rwake kuti arege kuita chinhu chakaipa.
Kurarama muhutsvene ndiyo yaive nzira yakanaka yekudzivirira kuita chakaipa. Hutsvene ndiwo mushonga mukuru wekubvisa kuipa.
Tito 2:11 Nokuti nyasha dzaMwari dzakavonekwa, dzinovigira vanhu vose kuponeswa.
Mamishinari akatakura ruponeso akaenda narwo pasi rose kuti vanhu vose vakwanise kunzwa Evangeri reruponeso.
Tito 2:14 … kuti azvinatsire vanhu kuti vave vake chaivo.
Kuomerwa nemiyedzo yakasangana nemamishinari yaive moto yaivanatsa nekuvaita vatsvene.
Bhuku 57: Firimoni
Nguva yekereke yeRaodikia.
Nguva yekereke yekupedzisira. Muranda Onisimo, munhu akazvimiririra, akakwanisa kupunyuka kubva kuna tenzi vake akauya kuzotenda dzidziso dzaPauro. Nhasi tinoda kupunyuka kubva kumakereke edu akakura, ane pfuma uye asingade chinhu anozvizadzisira zvose. MaKristu vave varanda kumakereke avo nekuti makereke anovamanikidza kutevera tsika nezvinyakare zvekereke.
Zvakadaro Jesu (Shoko) amire kunze pamusuwo wechivakwa chekereke .
Jesu anotaura kwete kukereke, iyo yaanomhura, asi kuvanhu vakazvimiririra vachiri neshungu dzekutevera Magwaro.
Zvakazarurwa 3:14 Nyorera mutumwa wekereke iri paRaodikia, uti: ...
20 Tarira ndimire pamukova: (mukova wekereke kwete mukova wemoyo wemutadzi) kana munhu akanzwa inzwi rangu, akazarura mukova ...
Pauro akaponesa Onisimo kubva kune rumwe rufu. Tinofanira kudzokera kudzidziso dzaPauro nevapositora muTestamente Itsva kana tichida kuponeswa kubva kune rumwe rufu munguva yekutambudzika kukuru.
ISAYA 57:1 Akarurama anoparara asi hakuna munhu ane hanya nazvo: ...
MaKristu akanaka ari kurasika mumakereke edu anhasi akabva pakutevera Bhaibheri zvakazara. Mararamiro enyika ino nemharidzo dzine mbiri aita kuti makereke aya ave nembiri. Vanotenda muBhaibheri vechokwadi vari pachokwadi havadiwemo. Vanhu vanoponda hunhu hwevanhu nekupa vanhu vanotenda kuBhaibheri zita rekuti vapikisi vanorambwa nedzimwe nhengo dzekereke nevafundisi vavo vadzvanyiriri.
ISAYA 57:1 ... Navanoda Mwari vanobviswa, kusina munhu anorangarira kuti vakarurama vanobviswa pazvakaipa.
Saka Isaya akaporofita kuti pakupera kwenguva yekereke yechinomwe Mwari achadzoka kuzotora kereke yake yechokwadi kuti vabviswe kunguva yekutambudzika kukuru.
ISAYA 57:3 Asi swederai pano imi vanakomana vomuroyi, zvibereko zvemhombwe nechifeve
Apo nyoka yakanyengera Eva, saka Satani akanyengera makereke edu anhasi. Tsika dzemasangano edu dzakabva patsime risina kunaka. Saka makereke edu anomhurwa sezvifeve.
Zvakazarurwa 3:17 Nokuti unoti ndakafuma, ndakafumiswa, handishaiwi chinhu; usingazivi kuti ndiwe unovurombo nenhamo, urimurombo nebofu usina chokufuka.
ISAYA 57:8 Wakaisa chirangaridzo chako shure kwemikova nezvivivo, (zvezvivakwa zvamakereke) nokuti wakazvifukurira mumwe, asati ari ini,
Kereke inosarudza hutungamiri hwevanhu. Vafundisi vanozviti misoro yemakereke avo, ndicho chikonzero nei Jesu akamira kunze. Jesu Kristu ndiye anofanira kuva musoro. Hakuna muviri unokwanisa kuita misoro miviri.
ISAYA 57:20 Asi vakaipa vakafanana negungwa rakabvongodzwa; nokuti harigoni kuzorora, asi mvura yaro inoburitsa matope namarara.
Chikara chikuru kana kuti simba rechisatani rakasimuka kubva mugungwa kuna Zvakazarurwa 17 raive nemutasvi wemukadzi. Mukadzi anomiririra kereke. Kana kereke ikabva pamagwaro, inosimudza mweya ine simba kwazvo asi isina zororo. Hwaro hunodzikira kubva pakushama netsvina yekusapfeka zvakadzikama, kurambana nekurooranazve, nemakereke anozvisanganisira muzviitiko zvematongerwo enyika. Zviitiko zvinobva zvafanana nezvaive pamazuva eSodoma neGomora.
ISAYA 57:21 Zvanzi naMwari wangu vakaipa havana rugare.
Kana Jesu ari kunze kwekereke avo vari mukati, kunyangwe vakaponeswa vanenge vakananga kunguva yeKutambudzika. Hakuzovi norugare.
Firimoni 1:2 nokuna Arkipo; murwiri pamwechete nesu, nokukereke iri mumba mako;
Pauro akakurudzira kereke inosanganirana mumba. Makereke makuru anozviwisira kuhutungamiriri hwevanhu, kurwira masimba uye kutonga kwevafundisi. Iyi inzira yekubika nyakanyaka munguva yedu isingaone yemapofu.
Zvinhu zvanyatsoipa kusvika apa here?
Ruka 18:8 Asi kunyangwe zvakadero mwanakomana wemunhu kana achisvika, uchawana kutenda panyika here?
Izvi hazviiti sekuti mamiriyoni evaKristu agadzirira Kuuya kwaShe.
Matthew 22:2 Vushe bwokudenga bwungafananidzwa nomumwe mambo, wakaitira mwanakomana wake mutambo wokuwana;
3 akatuma varanda vake kundodana avo vakanga vakokerwa kumutambo wokuwana; vakaramba kuvuya.
5 Asi havana kurangarira vakaenda, mumwe kumunda wake, mumwe kukutengesa kwake;
6 vamwe vakabata varanda vake, vakavaitira zvakaipa, vakavavuraya.
8 Zvino akati kuvaranda vake: mutambo wokuwana wakagadzirwa, asi vakanga vakokerwa vakanga asina kufanirwa.
Saka maKristu akaponeswa nhasi uno vanofanira kukwira kudenga kuenda kumuchato weGwaiana vari kupedzerwa nguva zvakanyanya nezvido zvavo uye nezvido zvemasangano avanobata vari. Havachina basa nekutevera Bhaibheri, vanobva varamba avo vanoda havo kutevera Bhaibheri. Vanoita chiedza cheBhaibheri zvirahwe nemibvunzo yavasingagoni kupindura, vozviti hazvina kukwanira. Kusaziva Bhaibheri ndiro mutupo. “Saka zvine basa rei?” vanoti, “Harina kukosha”. Vanovimba nekuti vanoenda kukereke nguva dzese. Asi kereke yavo ndiyo iri kuita kuti vagare mukusaziva zvakanyorwa muBhaibheri.
Tarirai mufananidzo wevasikana gumi. Vakadzi vanomiririra makereke. Ava vakadzi vakachena saka tiri kutarisana nevanhu vakaponeswa mumakereke aya. Asi vachaitei Mwari vasati vauya vari chikomba? Vese vanenge vakarara. Izvi hazvifadzi. Makereke edu anoda kumutswa.
Saka nguva yekutambudzika kukuru inounza kupera kunorwadza kwenguva inofeva yeRaodikia zvinoreva kuti kodzero dzevanhu.
Vasikana vakangwara vanoenda Kudenga. Vasikana vakavata vanopinda munguva yekutambudzika kukuru. Evangeri rinotendeukira kumaJuda kubva kuvahedheni. Saka Bhuku rinotevera ndi “VaHeberu”.
Pachikamu chinotevera tichatarisa kubva kuna vaHeberu kusvika kuna Zvakazarurwa